कोरियन कम्पनीले नेपालमै गाडी बनाउने – Rajdhani Daily
कोरियन कम्पनीले नेपालमै गाडी बनाउने
काठमाडौं। अब कोरियन कम्पनीले नेपालमै चारपांग्रे सवारीसाधन बनाउने भएको छ । सरकारले नेपालमै चारपांग्रे सवारीको एसेम्बलिङ प्लान्ट राख्न विदेशी लगानी स्वीकृत गरेपछि कोरियन कम्पनीलाई अब नेपालमै चारपांग्रे सवारीसाधन बनाउने बाटो खुलेको हो । शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले कोरियन कम्पनी मोटरेक्स कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा ल्याउन लागेको १० अर्ब ५४ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको हो । कोरियन कम्पनीले १० अर्ब ५४ करोड लगानी गरेर ‘भेहिकल एसेम्बलिङ प्लान्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डसमक्ष पेस गरेको थियो । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बसेको बोर्ड बैठकले करियन कम्पनी मोटरेक्स कम्पनी लिमिटेडको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबारको बैठकले सो लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यसअघि नेपालमा गोल्छा समूहले मात्र चारपांग्रे सवारीको एसेम्बलिङ सुरु गरेको थियो । गोल्छा समूहले मुस्ताङ ब्रान्डको चारपांग्रे जिप उत्पादन गरी बजारमा ल्याएको थियो । स्वदेशी उत्पादन सो मुस्ताङ गाडीको प्रवद्र्धनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले समेत केही समय मुस्ताङ गाडी चढेर मुलुकको भीआईपी सफारिमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याउन खोजेका थिए । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने त्यो अभियान त्यसै हराएको अवस्था छ । हाल पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रयोग गरेको मुस्ताङ गाडीको उत्पादन बन्द भइसकेको छ । मुस्ताङ ब्रान्डको सो गाडी लामो समय उच्च हिमाली जिल्लाका कच्ची बाटोमा राम्रैसित चलेको थियो । नेपालमा हाल दुईपांग्रे सवारी गोल्छा समूहकै अगुवाइमा बजाजका केही बाइक एसेम्बलिङ हुने गरेका छन् ।
साढे १० अर्ब ५४ करोडको लगानी स्वीकृत
यसैगरी, बोर्ड बैठकले निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्गका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न स्थानीय जिल्ला प्रशासन प्रशान कार्यालयको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । यो कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्गको समस्या हल गर्ने योजना बोर्डको छ । त्यसैगरी, अरुण तेस्रोको लगानी स्रोतको सुनिश्चितता ‘फाइनान्सियल क्लोजर’का लागि पनि तीन महिना समय थप गर्ने निर्णय भएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको हालसम्म पनि ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुन सकेको छैन । जसका कारण उसले म्याद थप गर्न माग गर्दै आएको थियो । यसैगरी, चिनियाँ लगानीमा बन्न लागेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगको जेभीलाई पनि शुक्रबारकै लगानी बोर्डको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यसअघि स्वीकृत भएको सेयर हिस्सेदारीको अंशलाई संशोधन गरिएको हो ।
लगानी सम्मेलनका लागि ६३ आयोजना सूचीकृत
यसैगरी, लगानी बोर्डले आगामी १४ र १५ चैतमा काठमाडौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनका राख्ने गरी ६३ वटा आयोजनालाई सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । योजना आयोगले पहिचान गरेका ४५ वटा र विभिन्न निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित १७ वटा आयोजनालाई लगानी सम्मेलनमा लगानीको आह्वान गर्दै राखिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए । यसअनुसार सम्मेलनमा जलविद्युत्, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सहरी विकासलगायतका विभिन्न क्षेत्रका ६२ आयोजना राखिने भएको छ । बैठकपछि अधिकारीले लगानी सम्मेलनमा ४ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताले सहभागी जनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताए ।
बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा सरकारी उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरू, उच्च व्यावसायिक घरानाका प्रमुख र विभिन्न कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन् । सो बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्याकुमारी अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायत सहभागी भएका थिए । निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र अर्का एक जना बालकृष्ण सिवाकोटी सहभागी भएका थिए ।
Tags: कोरियन कम्पनीले नेपालमै गाडी बनाउने
दाङमा प्राकृतिक विपत्बाट एक वर्षमा २६ जनाको मृत्यु
घोराही । प्राकृतिक विपत्मा परी गत वर्ष दाङमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा भएको प्राकृतिक विपत्मा परी उनीहरुको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा १४ पुरुष र १२ महिला रहेको जिल्ला आपत्का...
काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन युरोपेली मुलुक अष्ट्रियाको साताव्यापी भ्रमणका लागि आज बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त...
काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन युरोपेली मुलुक अष्ट्रियाको
७० वर्षीया वृद्धासहित तीनको हत...
भोटोजात्रा २६ जेठमा...
वैज्ञानिक भन्छन् : नेपालमा फेरी आठ रेक्टरको भूकम्प… (30,594)
लोकसेवा तत्काल नखुल्ने, कर्मचारी समायोजनपछि बल्ल विज्ञापन (26,608)
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको लोकसेवाको ठहर (22,066)
१४ हजार पदमा लोकसेवा खुल्दै, खरिदारदेखि सहसचिवसम्म… (18,665)
विवाह लक्षित महाकुम्भ जुत्तामेला सुरु (17,767)
कार्गो जहाजमा ग्यास चुहिएर दुर्घटना, दश जनाको मृत्यु
दुर्घटनामा परेर मरिसके भनेका व्यक्ति जिवित भेटिएपछि…
चलचित्र चलाउन पुराना हिट गीतको सहारा
काठमाडौं। नयाँ चलचित्र ‘रातो टीका निधारमा’को शुक्रब
मोदीको जितसँगै उनको फिल्म रिलिज
मुम्बई । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवन कथामा आधारित फ